VPSA ဖုန်စုပ်အောက်ဆီဂျင်မီးစက် - တရုတ်ဟန်ကျိုး Poly Air ကိုခှဲနပစ္စည်း
လေထုထဲတွင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ 1. VPSA ဖိအားလွှဲထိစိမ့်အောက်စီဂျင်မီးစက်၏နိယာမအလုပ်လုပ်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်ဖြစ်ကြသည်။ လေထုထဲတွင်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင် (အောက်စီဂျင်နိုက်ထရိုဂျင်မှတဆင့်စုပ်ယူနိုင်ပါသည်) အပူချိန်မှာ zeolite အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောထိစိမ့်စွမ်းဆောင်ရည် (ZMS) ရှိသည်။ အခါ zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါစုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သော adsorptio အတူပြည်နယ်အတွင်းရှိလေထုဖိအား zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါထိစိမ့်နိုင်စွမ်း, (နိုက်ထရိုဂျင်အိုင်းယွန်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောမော်လီကျူးဆန်ခါမျက်နှာပြင်အင်အားသုံး) အောက်စီဂျင်ထက် သာ. ကောင်း၏အပေါ်နိုက်ထရိုဂျင် ...
1. လေထုထဲတွင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုနိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်ဖြစ်ကြသည်။ လေထုထဲတွင်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင် (အောက်စီဂျင်နိုက်ထရိုဂျင်မှတဆင့်စုပ်ယူနိုင်ပါသည်) အပူချိန်မှာ zeolite အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောထိစိမ့်စွမ်းဆောင်ရည် (ZMS) ရှိသည်။ အခါလေထုတစ် zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါစုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောထိစိမ့်အိပ်ရာနဲ့ပြည်နယ်အတွက်ဖိအား, မော်လီကျူးဆန်ခါထိစိမ့်နိုက်ထရိုဂျင်, ထိစိမ့်ဒီထက်အောက်စီဂျင်, အာရုံစူးစိုက်မှု zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါထိစိမ့်နိုင်စွမ်းအပေါ်နိုက်ထရိုဂျင်, အောက်ဆီဂျင် (နိုက်ထရိုဂျင်အိုင်းယွန်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောမော်လီကျူးဆန်ခါမျက်နှာပြင်အင်အားသုံး) ထက် သာ. ကောင်း၏ နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဆင့်ထိစိမ့်အိပ်ရာ, အောက်ဆီဂျင်နှင့်အောက်ဆီဂျင်များအတွက်နိုက်ထရိုဂျင်ခွဲခြာအတွက်စီးဆင်းကြသည်။ ယင်းမော်လီကျူးဆန်ခါရွှဲမှနိုက်ထရိုဂျင် adsorbs သောအခါ, လေထုရပ်တန့်နေသည်နှင့်ထိစိမ့်အိပ်ရာ၏ဖိအားကိုလျှော့ချထားသည်။ ယင်းမော်လီကျူးဆန်ခါကစုပ်ယူနိုက်ထရိုဂျင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်ပါတယ်နှင့်မော်လီကျူးဆန်ခါ regenerated နှင့်ပြန်သုံးနိုင်ပါသည်။ အောက်ဆီဂျင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောထိစိမ့်ကုတင်အကြား switching နေဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်စီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်၏ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်နီးကပ်သည် ဖြစ်. , နှစ်ခုခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါကြောင့်ဖိအားလွှဲထိစိမ့်အောက်စီဂျင်-အောင် device ကိုသာ 90-95% အောက်စီဂျင် (အောက်စီဂျင်၏ဝင်ရိုးစွန်းအနုတ်လက္ခဏာအာရုံစူးစိုက်မှု 95,6% ဖြစ်တယ်, ကြွင်းသောအရာအာဂွန်သည်) ရယူနိုငျပါသညျ။ အဆိုပါ cryogenic လေကြောင်းခွဲခြာယူနစ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်, အဆုံးစွန်သောထက်ပို 99,5% အောက်စီဂျင်အာရုံစူးစိုက်မှုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
1. ဖိအားလွှဲထိစိမ့်လေထုခွဲခြာအောက်စီဂျင်စက်ရုံ၏ထိစိမ့်အိပ်ရာနှစ်ခုစစ်ဆင်ရေးခြေလှမ်းများပါဝင်ရပါမည်; ထိစိမ့်နှင့်အ resolution ကို။ စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ငွေ့ရယူနိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ခုကျော်ထိစိမ့်ကုတင်များသောအားဖြင့်အောက်ဆီဂျင်-အောင်ကိရိယာများတပ်ဆင်ထားပါသည်, အချို့လိုအပ်သောအရန်ခြေလှမ်းတွေစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှု၏ရှုထောင့်ကနေလည်းထွက်မသတ်မှတ်နေကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုထိစိမ့်အိပ်ရာယေဘုယျအားဖြင့်အစားထိုးခြင်းနှင့်ပင်ဖိအားထပ်တိုး flushing, ထိစိမ့်, decompress, ဖုနျစုသို့မဟုတ် decompress သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးကဲ့သို့သောခြေလှမ်းတဆင့်သွားကြဖို့ရှိပါတယ်, နှင့်အခါအားလျော်စွာစစ်ဆင်ရေးထပ်ခါတလဲလဲ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စီထိစိမ့်အိပ်ရာကွဲပြားခြားနားသောစစ်ဆင်ရေးခြေလှမ်းများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိအားလွှဲထိစိမ့် device ကိုချောချောမွေ့မွေ့ပြေးစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ငွေ့ရယူနိုင်အောင် PLC များ၏ထိန်းချုပ်မှုလက်အောက်တွင်အတော်ကြာထိစိမ့်ကုတင်၏စစ်ဆင်ရေး, လက်တွေ့ခြေလှမ်းအတွက်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်နိုင်အောင်ပြင်းထန်စွာနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ခွဲခြာဖြစ်စဉ်ကိုအဘို့, လေထုထဲတွင်အခြားအသဲလွန်စအစိတ်အပိုင်းများကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောပေါ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ရေထိစိမ့်စွမ်းရည်သင့်လျော်သောစုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သော (သို့မဟုတ်အောက်ဆီဂျင်-အောင်စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောသူ့ဟာသူ) နှင့်အတူထိစိမ့်အိပ်ရာဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်သည့်, ယေဘုယျအားဖြင့်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်၏ထက်အများကြီးကြီးမြတ်တော်မူ၏။
အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုထုတ်ကုန်များအတွက်လိုအပ်ထိစိမ့်တာဝါတိုင်အရေအတွက်အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်မှု, စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ဖြစ်စဉ်ကိုဒီဇိုင်း၏စကေးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Multi-မျှော်စင်စစ်ဆင်ရေး၏စစ်ဆင်ရေးတည်ငြိမ်မှုအတော်လေး သာ. ကောင်း၏ပေမယ့်ပစ္စည်းကိရိယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတော်လေးမြင့်မားသည်။ လက်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်ထိစိမ့်တာဝါတိုင်များ၏အရေအတွက်ကို minimize နှင့်ယူနစ်များ၏ထိရောက်မှုတိုးတက်လာဖို့တိုတောင်းတဲ့ operating ကာလကိုသုံးပါရန်နှင့်တတ်နိုင်သမျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကယ်ဖို့အလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာအောက်စီဂျင် sorbent သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
2. အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်မှု၏စကေး 10000m3 / ဇအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပြီး, ပါဝါစားသုံးမှုနိမ့်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငယ်များရှိ၏
3. မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ၏ပမာဏကိုသေးငယ်သည်, ထိုကိရိယာ၏ installation ကိုကာလ cryogenic ကိရိယာ၏ထက်တိုတောင်း၏,
5. အဆိုပါ device ကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ဖို့အမြန်, စစ်ဆင်ရေးအတွင်းအလိုအလျောက်၏မြင့်မားသောဒီဂရီရှိပါတယ်, နှင့်အော်ပရေတာ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်က;
6. အဆိုပါ device ကိုအားကြီးသောစစ်ဆင်ရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်မြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိပါတယ်;
သာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ကြာမြင့်စွာဝန်ဆောင်မှုဘဝနှင့်အတူ 8. တင်သွင်းအောက်စီဂျင်မော်လီကျူးဆန်ခါ;
9. ခိုင်ခံ့သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် (သာလွန်ဝန်လိုင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းမြန်နှုန်း) ။
1. ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 100-10000nm3 / h
2. အောက်ဆီဂျင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်: 90-94% သို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်, အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ 30-95% အကွာအဝေးအတွင်းချိန်ညှိနိုင်သည့်။
အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်မှု၏3ပါဝါစားသုံးမှု: အောက်ဆီဂျင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 90% ဖြစ်ပါတယ်အခါ, စင်ကြယ်သောအောက်စီဂျင်သို့ကူးပြောင်းပါဝါစားသုံးမှု Nm3 / 0.32-0.37kwh ဖြစ်ပါသည်
4. အောက်ဆီဂျင်ဖိအား: 20kpa ထက်မပို (ဖိအားနိုင်ပါသည်)
5. Power: ထက် သာ. ကြီးမြတ်သို့မဟုတ် 95% နဲ့ညီမျှ
ယခင်: PSA အောက်ဆီဂျင်မီးစက်
နောက်တစ်ခု: ZBN နိုက်ထရိုဂျင်မီးစက်
အလိုအလျောက် Psa ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်အောက်ဆီဂျင် Generator ကို
ဖျက်သိမ်းအောက်ဆီဂျင် Generator ကို
ဖျက်သိမ်းအောက်ဆီဂျင် Nano ပူဖောင်း Generator ကို
မူလစာမျက်နှာအောက်ဆီဂျင် Generator ကို
စက်မှုအောက်ဆီဂျင် Generator ကို
အရည်အောက်ဆီဂျင် Generator ကို
Cylinder များအတွက်အောက်စီဂျင် Generator ကို
ငါးမွေးမြူရေးများအတွက်အောက်စီဂျင် Generator ကို
အောက်စီဂျင် Generator ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
အောက်ဆီဂျင်ဟိုက်ဒရိုဂျင် Generator ကို
အောက်စီဂျင်စက်ရုံ Psa အောက်စီဂျင် Generator ကို
passive အောက်ဆီဂျင် Generator ကို